१९४५ को कोरोना परीक्षण हुँदा पछिल्लो २४ घण्टामा देखिएनन् नयाँ संक्रमित
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको आशंकामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९ सय ४५ जनाको नमूना परीक्षण गरिएको भए पनि कसैमा पोजेटिभ देखिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ४९ हजार ३ सय ३६ को स्वास्थ्य परिक्षण गरिसकेको छ । जसमध्ये ९ हजार ६ सय ६६ जनाको पिसिआर र ३९ हजार ६ सय ७० जनाको आरडिटिबाट परीक्षण भएक...
आन्तरिक तथा बाह्य उडान जेठ २ गतेसम्मका लागि बन्द
काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई जेठ २ गतेसम्म बन्द राखिने बताइएको छ । शनिबार बसेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको बैठकले उक्त जेठ २ गतेसम्मका लागि आन्तरिक तथा बाह्य उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय उडान सरकारले वैशाख १८ गतेसम...
कोरोना भाइरसबाट विश्वमा मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ९७ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । कोरोना भाइरस ‘कोभिड- १९’ को महामारीबाट विश्वमा शनिबार दिउँसोसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ९७ हजार नाघेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्‍क अनुसार कोरोनाबाट विश्वमा १ लाख ९७ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको हो । यस्तै अहिलेसम्म २८ लाख ३४ हजार २ सय ८९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको...
अमेरिकामा कोरोनाका कारण ५२ हजार बढीको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ५२ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । शनिबारसम्म अमेरिकामा ९ लाख २५ हजारभन्दा बढीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि हुँदा त्यहाँ ५२ हजार २१७ जनाको मृत्यु भएको हो । अमेरिकामा दैनिक हजारौं संख्यामा कोरोना स‌ंक्रमित बढीरहेका छन् । मृतकको संख्या पनि हजारौंका दरले दिनह...
नेपाल कोरोनाको अति उच्च जोखिमबाट उच्च जोखिममा : डब्ल्युएचओ
काठमाडौं । नेपाल कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिमबाट एक तह तल झरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको हो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै डब्लुएचओले उच्च जोखिममा राखेको हो । छिमेकी मुलुक चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस द...
सशस्त्रका १७ एसएसपीको सरुवा तथा पदस्थापन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका १७ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूको सरुवा तथा पदस्थापन भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को निर्णयानुसार सशस्त्र प्रहरीका ४ जना एसएसपीहरूको सरुवा तथा हालै बढुवा भएका १४ जना एसएसपीहरूको पदस्थापन भएको हो । हेर्नुहोस् कसको सरुवा र पदस्थापन कहाँ भयो ?
'पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमित भेटिएन, १० जना निको भए, ३८ जनाको उपचार हुँदै'
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाको नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो २४ घण्टामा नयाँ संक्रमित भेटिएको जनाएका हुन् । हालसम्म आरडीटीमा ३८ हजार ८९ जना र पिसिआर विधिबाट ९ हजार ४०७ जना गरी जम्मा ४७ ह...
बेलयातले मानिसमा गर्‍यो कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षण
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरिएको छ । डेलिमेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी भ्याक्सिनोलोजी प्राध्यापक सारा गिल्बर्ट नेतृत्वको टोलीले तीन महिनामा निर्माण गरेको खोपको मानवीय परीक्षण सुरु गरिएको हो । खोपको परीक्षणका लागि राजी भएक...
अध्यादेश फिर्ता हुँदैमा यसबाट प्रेरित अपराधमा कानुनी उन्मुक्ति हुनुहुन्न : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता लिएपनि यो प्रकरणसँग जोडिएको अपराधिक गतिबिधिमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं...
विश्वभर साढे सात लाखले जिते कोरोना भाइरसलाई
काठमाडौं । विश्व कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनिरहदा अहिलेसम्म विश्वभर साढे सात लाख मानिसले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन् । अहिले कोरोनाबाट बच्न संसारको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या लकडाउनमा छ । लाखौं मानिस कोरोनालाई जितरे अस्पतालबाट घर फर्केका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, शुक्रबारसम्म कोरोनालाई...
भारतमा २३ हजार नाघ्यो कोरोना संक्रमितको संख्या
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २३ हजार नाघेको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घन्टामा एक हजार ६४८ जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमितहरूको कुल संख्या २३ हजार ७७ पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको २४ घन्टा...